काभ्रेमा बन्दै बेनिशाको ‘प्रेमगञ्ज’ – bampijhyala.com
Home > समाचार > चलचित्र > काभ्रेमा बन्दै बेनिशाको ‘प्रेमगञ्ज’
१७ बैशाख २०७८, शुक्रबार १४:२८ bampijhyala
बाँपीझ्याला, काठमाण्डौं । अभिनेत्री बेनिशा हमालको मुख्य भूमिका रहेको फिल्म ‘प्रेमगञ्ज’ अहिले छायाँकनमा छ । फिल्मको काभ्रेमा धमाधम छायाँकन भैरहेको छ । बिहीबारबाट काठमाडौंमा उपत्यकामा लकडाउन भएपनि काभ्रेमा लकडाउन नभएकोले फिल्मको छायाँकन भैरहेको हो । अझै केही साता फिल्मको छायाँकन काभ्रेमा गरिने अभिनेत्री बेनिशाले बताइन् ।
के साम्राज्ञीले सुरु गरेकी हुन् अनलाईन ब्यवसाय ?
सर्वोच्च अदालतले तोक्यो रिट निवेदन र सुनुवाइ समय, कोरोनासम्बन्धी रिट निवेदनको दर्ता कहिले ?
तामाकोशी गाउँपालीकामा कोरोना संक्रमण तिब्र, आज बेलुका ५ बजे देखि ८ गते बेलुका ५ बजेसम्म शहरे शिल १७ बैशाख २०७८, शुक्रबार १४:२८
सम्झनामा जेठ ३ १७ बैशाख २०७८, शुक्रबार १४:२८
शरीरमा अक्सिजनको कमी हुँदा किन घोप्टो परेर सत्नुपर्छ ? १७ बैशाख २०७८, शुक्रबार १४:२८
माओवादी केन्द्र कस्तो बनाउने ? प्रचण्डले मागे सुझाव १७ बैशाख २०७८, शुक्रबार १४:२८
बालुवाटारमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक १७ बैशाख २०७८, शुक्रबार १४:२८